MacOS Catalina 10.15.5 Yekuwedzera Yekudzokorora Yakaburitswa | Ndinobva mac
Apple yakaburitsa vhezheni nyowani maawa mashoma apfuura kune vese vashandisi mairi iyo inowedzera shanduko iyo, senguva dzose, isina kutsanangurwa mumanotsi avo. Iyi vhezheni itsva ye macOS Catalina 10.15.5 inochengeta imwecheteyo zita remazita sezvo iri yekuwedzera yekuvandudza Uye inouya pamwe nemamwe mavhezheni avo eanoshanda masystem, iOS, watchOS uye tvOS izvo zvakare zvine shanduro nyowani dziripo dzekugadzirisa, kunyangwe yeiyo HomePod.
Isu tanga tine iyi vhezheni nyowani kwemaawa mashoma uye zvinoita sekunge shanduko dziri kuwedzerwa maererano nekushanda uko vashandisi vanogona "kuona nekubata", asi pane shanduko muchirongwa maererano kuchengeteka uye kugadzikana.
Mune ino kesi iyo nyowani yekuwedzera yekuwedzera ye macOS inotorwa otomatiki pane yedu Mac uye panguva imwechete iyo inotorwa zvizere inogona kuiswa. Zvirokwazvo iwe hautomboziva kuti iri kurodha pasi, chinhu chete chinosvika iwe chiziviso chiripo chekumisikidzwa.
Rangarira kuti kumisikidza iyi vhezheni tinofanirwa kutangazve sisitimu, haitore nguva yakareba asi isu tinofanirwa kuzvichengeta mupfungwa kana tiri kushanda neMac.Tinogona kunonoka kumisikidza vhezheni itsva yeapashure, kunyangwe zuva rinotevera kana tichida. Chero zvazviri, chinhu chakakosha ndechekuti iwe unogadziridza uye Apple mune ino kesi haina kupa sarudzo kuti tirege kutora iyo nyowani vhezheni Uye ngatimboiisai paMacs edu, kana iwe uine imwe ine macOS Catalina 10.15.5 iyo vhezheni nyowani ichaiswa munguva pfupi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Catalina » MacOS Catalina 10.15.5 Supplemental Dzokorora Yakaburitswa
Musi waJune 30, yekutanga MacBook Pro ine retina inoratidzirwa ichaonekwa seisingachashandi